Free True Scalper EA - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeFree Forex EAsFree True Scalper EA
Ny vokatra dia dikan-teny malalaka amin'ny Expert Mpanolotsaina manana ny anarana. Mifanohitra amin'ny dikan-teny feno, ny ankehitriny dia mividy ampahany betsaka amin'ny vola madinika indrindra. Ny EA dia mampihatra ny algorithm tokana tsy miankina mifototra amin'ny hetsika vidin-javatra mba handinihana ny toeran'ny tsena. TakeProfit ary StopLoss Ny safidy dia azo apetraka amin'ny tanana na automatique amin'ny EA. Ny tarehimarika dia mihidy amin'ny tombony, fotoana na aorian'ny hahatongavana amin'ny Level TakeProfit na StopLoss. Ny EA dia tsy mampiasa martingale, na hingging ary tsy misy rafitra sarotra. Azo ampiasaina amin'ny fitaovana ara-barotra miaraka amin'ny toerana mety telo na dimy ary mety tsara amin'ny varotra EURUSD M15.
Free True Scalper EA - Endrika
Azo atao ny mametraka ny haavon'ny haavon'ny haavony saingy tsy mihoatra noho ny hevitra 20.
Azo atao ny manao varotra amin'ny andro iray isan-kerinandro.
Ny tahiry minitra voalohany dia $ 50.
Ny EA dia miasa tsara indrindra amin'ny EURUSD M15.
Miasa amin'ny kaonty Standard sy ECN.
Free Scalper EA marina - tombony
Free Scalper EA marina - Parameter
Trade - fikovana mpivarotra.
Magic - Nomeran'ny majika ao amin'ny EA.
StopLoss - sandan'ny StopLoss Raha 0, ny isa dia apetraka ary apetraky ny EA.
TakeProfit - TakeProfit ny lanjan'ny tavotra. Raha 0, ny isa dia apetraka ary apetraky ny EA.
Max_Spread - haben'ny fahazoana mivelatra lehibe indrindra amin'ny fisokafana, amin'ny isa. Raha 0, ny sanda dia tsy mihoatra ny teboka 20.
Max_Lot - haben'ny fahazoan-dàlana avo indrindra.
TimeTrade - fandaharana ny fotoana ara-barotra.
OpenHour - ora fanombohana varotra.
OpenMinute - minitra manomboka amin'ny varotra.
CloseHour - ora farany fiafarana.
CloseMinute - minitra famaranana.
MarketWatch - ho an'ireo brokers tsy manaiky hametraka StopLoss, TakeProfit miaraka amin'ny fanokafana ny toerana.
Free Scalper EA maimaimpoana - takiana
Ireo mpivady voarindra: EURUSD.
Fotoana natokana: M15.